Wararka - Waxtarka shaah yaasmiin
Waxtarka shaah yaasmiin
Shaah -yaasmiin waxay ka tirsan tahay qaybta shaaha ee udugga leh. Markaad fiirineyso shaaha jasmine, marka hore fiiri qaabka, burooyinkeeda ayaa aad u caan ah, waxaana guud ahaan loo arki karaa shaah udgoon oo fiican. Kadib hubi maraqa si aad u aragto “cusub, ruuxi ah, qaro weyn, oo saafi ah”.
Waxtarka iyo doorka shaaha jasmine
1. Dumarka, cabitaanka shaaha yasmiin ma qurxin karo maqaarka oo kaliya, maqaarku wuu caddeeyaa, laakiin sidoo kale wuxuu ka hortagi karaa gabowga. Waxa kale oo uu miirmi karaa xiidmaha iyo caloosha, cadaadiska dhiigga oo hoos u dhaca iyo lipids -ka dhiigga, sidoo kale wuxuu saamayn weyn ku leeyahay iska caabinta bakteeriyada iyo fayraska.
2. Caffeine -ka ku jira shaaha yasmiin wuxuu kicin karaa habdhiska dhexe ee neerfayaasha, wuxuuna kaalin ka qaadan karaa ka -hortagga lulmidda, baabi'inta daalka, kor u qaadidda firfircoonida, iyo xoojinta fikirka; polyphenols shaaha, midabada shaaha iyo waxyaabaha kale waxay leeyihiin saamaynta xakamaynta bakteeriyada iyo fayraska.
3. Shaah Yaasmiin waxay leedahay saamayn, macaan, qabow, kulayl-nadiifin, sumoobin, qoyaan, saamayn dejin iyo dejin.
4. Shaah Jasmine kaliya ma ilaaliso saamaynta qadhaadh, macaan, iyo qabow ee shaaha, laakiin sidoo kale waxay noqotaa shaah diirran sababta oo ah habka dubista. Waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad iyo caafimaad oo kala duwan, kuwaas oo ka saari kara raaxo -darrada caloosha, oo dhalaali karta shaaha iyo udugga ubaxa ee daryeelka caafimaadka. .
Waqtiga dhejinta: Aug-18-2021
1 / F, dhismaha 2, Beerta Warshadaha Haiying, Magaalada Junlian, Degmada Junlian.